N'ogbe Press-ekpochi ụdị ígwè mmanya grating emeputa na Supplier |Jintai
Aha ngwaahịa:Ụdị ihe nchara ígwè akpọchiri akpọchi grating
Pịa grating nchara akpọchi akpọchi nke a makwaara dị ka splice steel grating.ọ bụ site a ụfọdụ size nke ewepụghị carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara, brass, aluminum efere uzo (oghere), splice na splice, ịgbado ọkụ, finishing na ndị ọzọ Filiks na-emepụta.Ntinye nchara grid efere na-ekpuchi efere grid nchara nkịtị nke ike dị elu, mgbochi corrosion, nrụzi n'efu, yana ngwakọta pụrụ iche nke nhazi nkenke, ịdị arọ na ọmarịcha usoro, nkwekọ n'okike, ụdị mara mma.Enwere ike iji ngwaahịa a mee ihe n'ọtụtụ ebe maka mkpuchi gutter, steepụ steepụ, mkpuchi ọdọ mmiri.
Pịa ekpochi ígwè grating case board na solder nkwonkwo siri ike, edo pitch, ezigbo elu, imewe mara mma, bara uru, ìhè, elu ike mgbochi corrosion, mmezi-free, na ọtụtụ ndị ọzọ atụmatụ, ugbu a ọtụtụ-eji na obodo na azụmahịa ụlọ, ihe nkiri. , ụzọ ụgbọ oloko, obodo na obodo engineering ubi, nwere ike ji mee ihe na uko ụlọ, ime ụlọ na n'èzí mma mma, ikpo okwu wara wara wara wara, transom (Wells), mgbasa ozi ihe e dere ede, ụdị nile nke cover efere, wdg Plug okporo efere solder nkwonkwo siri ike, na oghere oghere bụ ọbụna, net elu bụ ewepụghị, imewe mara mma, bara uru, ọ bụghị nanị na-eme ka isiokwu na-eji, bụ ọrụ nkà, mepụtara ọtụtụ narị iche n'ime afọ, na mbupụ ngwaahịa 16 miri ahịa favor.press. A na-eji grating ígwè ekpochi ekpochi eme ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ ihe nkiri, ụlọ ahịa ụlọ ahịa ma ọ bụ ihe ịchọ mma ime ụlọ, nwekwara ike iji mee ihe n'ụzọ ikpo okwu.
A pụkwara ịkpọ grating ígwè akpọchiri akpọchi, nke a na-eji ígwè carbon dị ala ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara mee ya.Site na ịrụ ọrụ nke ikike ịdị elu dị elu, nke na-adịghị mma, mgbochi corrosion na dị mfe iji wụnye ma wepụ ya, a na-eji grating nrụgide eme ihe n'ọtụtụ ebe maka elu ụlọ, ikpo okwu, ala, ngere na ụdị mkpuchi dị iche iche na ụlọ ọrụ, ụlọ obodo na azụmahịa.
Nkọwa nke grating ígwè akpọchiri akpọchi
* Akụrụngwa: obere carbon ígwè na igwe anaghị agba nchara. Aluminom ígwè ihe onwunwe
* Ọgwụgwọ n'elu: galvanized, agba ma ọ bụ ntụ ntụ.
* Ụdị elu: elu dị larịị na elu serrated.
Ụdị nkọwapụta nke ụdị ihe nchara ígwè a na-akpọchi akpọchi anyị na-emepụtakarị bụ 30mmx2mm na-ebu mmanya, 32mmx2mm na-ebu mmanya, 35mmx2mm mmanya, 38mmx2mm bearing bar na 40mmx2mm bearing, the cross bar is 10mmx2mm bar na 15mmx2mm bar,pitch of the bear. na cross mmanya bụ 30mmx30mm,38mmx38mm na-emekarị. N'ezie anyị nwere ike na-emepụta ngwaahịa dị ka gị ina.
Steel Walkway ntupu, Ogwe ụzọ nchara nchara, Igwe meghere ntupu ala, Ogwe ala nchara nchara, Steel ntupu grating, Steel Grid ntupu ala,